Ndi Ozo Banyere Ghari N’iile n’uwa rue Eskisehir | RayHaber | raillynews
HomeTurkeyCentral Anatolia Region26 EskisehirNdị na-anya ụgbọ mmiri zuru ụwa ọnụ na-abịa Eskisehir
10 / 12 / 2019 26 Eskisehir, ụgbọ okporo ígwè, eme, General, Isi akụkọ, Turkey
ndị ọrụ ụgbọ oloko na-abịa Eskisehir
Ndị Gha nke Globalzọ zuru ụwa ọnụ na-abịarute Eskişehir; Ọ bụ Modem Fuarcılık haziri ya na nkwado nke ofgbọ njem na akụrụngwa Nleba Ragbọ oloko Ngosiputa uzo nke uzo nke ugboala na teknụzụ ga-ejikọ ọnụ ọnụ nke 500 ijeri euro na-atụgharị ụzọ ụgbọ oloko n'ahịa ụwa na ndị ọrụ ụlọ ọrụ mpaghara dị na Eskişehir.
Ọgụgụ ahụ amalitegoro maka Rail Industry Show, Railway Industry Infrastructure and Technologies Fair, nke na-ezube ime ka ndị nnọchi anya gọọmentị na nkeonwe nke ụlọ ọrụ ụgbọ elu ụwa niile gbakọta. A haziri 14-16 site na nkwado nke Ministri Ingbọ njem na akụrụngwa n'April 2020 na nzukọ nke Flọ Ọrụ Egwuregwu Oge A. Gọọmentị Eskişehir, CDgbọ njem TCDD Inc., oflọ Ọrụ Ankara; Şlọ ọrụ azụmahịa nke Eskişehir, Eskişehir oflọ ọrụ mmepụta ihe, Eskişehir OSB, TMMOB Chamber of Electric Engineers Eskişehir Branch, DTD Railway Transport Association, na illọ Rail Systems Association so na ụlọ ọrụ ndị na-akwado ihe omume ahụ.
A ga-eme 15 100 ụlọ ọrụ ụlọ na ndị si mba ọzọ site na mba ahụ, 3 ga-enwe nkwado na ntinye nke ihe karịrị otu puku ndị ọbịa, ngosipụta ahụ ga-abụ ntọala maka ntọala nke kọntaktị azụmaahịa ọhụrụ na mmepe nke mmekọrịta dị adị. Ndị isi egwuregwu nke mpaghara nwere mpaghara ahịa zuru ụwa ọnụ nke ijeri euro na 500 ga-ekere òkè na ngosipụta ahụ. Turkey na ụwa nke akụrụngwa, superstructure, technology, nchekwa, electrification, na-agba ama na IT sịrị ga-ìhè tren usoro Nsukka, nakwa dị ka Okporo ígwè Industry Gosi na nkwurịta okwu.
Ihe oru ngo ga-ezute ndi nwere ego Otu ubochi tupu ihe ngosi a, 13 ga-enwe nnọkọ nke ndị na-etinye okporo ụzọ na ndị nwe ihe omume n’April. A ga-at ule atumatu, usoro ego na ihe ndi ozo n’abia nzuko a. Nzukọ a ga-agụnye ụlọ akụ, ndị na-ahụ maka ego, ndị nnọchi anya gọọmentị obodo na nke ndị si mba ọzọ, gọọmentị ime obodo, nyocha ọrụ, mkpuchi na ụlọ ọrụ iwu. Dabere na arịrịọ ahụ, a ga-ahazikwa nzukọ maka imekọ ihe ọnụ. N’abia ogbako a, a ga-enwe nzuko nzuko di iche n’otu n’otu iji hazie okwu banyere okwu a.
Teknụzụ, agụmakwụkwọ na ụlọ ọrụ 4.0 ga-atụle ndị ọkachamara n'oge nnọkọ a ga-enwe n'oge ngosi. mmepe nke ụzọ ụgbọ okporo ígwè na Turkey, n'etiti mbipụta na ike inyocha na 2023 lekwasịrị mkpa ka e mee, a ga-akwadebe maka municipalities kpuchie a iche iche panel na ụzọ ụgbọ oloko investments.
Ntọala isi ụlọ Eskisehir
Onye isi oche azụmahịa nke Eskişehir Metin Güler kwupụtara na ngosipụta ahụ dị ezigbo mkpa maka Eskişehir wee kwuo: şüphesiz Otu n'ime ihe kachasị mkpa mere ụlọ anyị ji kpebie itinye ego na Eskişehir Fair Convention Center bụ ụlọ ọrụ ụgbọ oloko. Ministri mmepe nyere anyị nkwado kachasị maka obodo Anatolia. Inye aka na ikike ịkwado ụzọ ụgbọ okporo ígwè, ọdụ ụgbọ elu na ụyọkọ ụgbọ ala bụ otu n'ime ebumnuche kachasị mkpa nke ụlọ ọrụ ngosi ziri ezi a ga-ehiwe na Eskişehir. The ngo emi ada mba anyị n'ime a oge a na ụlọ ọrụ na sub-ọrụ, ụkpụrụ nke ahia Eskişehir'deyken otu ebe nke nrutu nke ụzọ ụgbọ okporo ígwè na Turkey otú ndammana anyị n'ógbè. "
Mpaghara a dị mkpa n'ụzọ dị mkpa
Moris Revah, onye isi njikwa mgbasa ozi nke oge a kwuru na ebum n’obi ha bụ iji rụọ nnukwu ọrụ na airslọ Ọrụ Mmeba Ahụ na Teknụzụ. Revah kwuru, kapsamında N'ime ogo nke nzukọ a dị mkpa, ọ bụghị naanị ngosipụta, kamakwa nzukọ na ihe omume dị iche iche ga-eme. Karịsịa, ụbọchị tupu ngosi ahụ ga-emepe, anyị na-ahazi ndị nnọkọ dị oke mkpa na ndị ọkachamara n'ihe gbasara ụzọ okporo ụzọ ego. Ndị na-ahụ maka ego, ndị nọ na mmalite nke ego n'okporo ụzọ ụgbọ elu na ọnụ ọgụgụ ụwa, ga-abịa na mba anyị. Ndị a ga-enwe ike ịgwa ụlọ ọrụ ndị ahụ okwu ozugbo ogbako a gachara. ”
Revah kwuru na ihe kacha mkpa maka mmepe obodo bụ okporo ụzọ ụgbọ oloko, Revah kwuru, sị: “Usoro ụgbọ okporoko abụghị naanị na-eme ka okporo ụzọ dị mma kama ọ bụ usoro ụgbọ njem kacha arụ ọrụ nke ọma. You nwere ike iburu tọn 25 dịkarịsịrị ọsọ na TIR, mana enwere ike ibunye tọn 60 tọn n'ime ụgbọ ala. Mgbe ụgbọ ala 50 nọ n'ụgbọ okporo ígwè, akaụntụ ahụ doro anya. Na mgbakwunye, ụgbọ okporo ígwè dị ọnụ ala karịa 60 n'akụkụ oké osimiri na 80 site n'okporo ụzọ.
TÜVASAŞ keere na Inno trans 2012 Berlin mma na ndị ụwa giants
World Refeyim na-ọkụ ọkụ iji privatize ụgbọ okporo ígwè na Turkey
Ndị dike ụwa na-akwadebe maka Kanal Istanbul
Ndị dike nke Ndekọlọtọ na-ezute kwa afọ na logitrans
Ndị dike nke Esia ga-akara akara İzmir International Fair
Nnukwu ugbo ala na-abịa
Istanbul-Eskişehir ngalaba nke ngalaba Geyve district Orencik mebiri ngalaba…
Nlere Obi Oma: N'ime Oke Ogba Mgbaala N'okpuru ala nke Eskişehir Garda Railway…
Nkwupụta obi ike: Ịzụta akụkụ ụwa (TÜVASAŞ)
Ihe omumu nke International Hill of Global onyonyo na Middle East
Na-arị elu n'ahịa ụwa site n'ọdụ ụgbọ okporo ígwè
ndị na-etinye okporo ụzọ
Iantszọ ụgbọ oloko zuru ụwa ọnụ
Nleba Ragbọ oloko